के पुरुषको बुढेसकाल को संकेत गर्छ?
समय: 2019-08-09 दृश्य:
सेतो कपाल र झुर्रीहरू बुढेसकालका सल्लाह हुन्. शरीर वास्तवमा पछि डाउनहिल जान सुरु भएको छ 30 वर्ष पूरानो. एउटै समयमा, त्यहाँ केहि संकेतहरू देखा पर्दै छन्।
अब, हामी जान्छौं जब विशेष उमेरहरू पुरुष उमेर हुन्छन्.
1. निद्राको गुणस्तर बिग्रिन थाल्छ. यो बुढ्यौलीको पहिलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण चिन्ह हो. जब हामी जवान छौं, निद्राको गुणवत्ता विशेष राम्रो छ. हामी हरेक बिहान जोश र शक्तिले भरिएका छौं. तर जब हामी बूढा हुन्छौं, हाम्रो निद्राको गुणस्तर झन् झन् खराब हुँदै जान्छ. राम्रो समयको लागि कहिलेकाँही औषधीमा भर पर्नु पर्छ. पुरुषहरूको लागि, न्यून निन्द्राले अन्तःस्रावी विकारहरू निम्त्याउन सक्छ, हार्मोन असंतुलन र पेटको फ्याट वृद्धि.
2. Nocturia ले बुढेसकाल पनि संकेत गर्दछ. उमेर बढ्दै जाँदा, प्रोस्टेट ठूलो हुनेछ. र विस्तारित प्रोस्टेट मूत्रमार्ग संकुचन गर्दछ, त्यसैले रातो कारण छ।
3. निद्रा भएको बेला तपाईंसँग छातीको कडाई र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ. यसले संकेत गर्दछ कि मुटुको कार्य खराब हुँदै गइरहेको छ र यो बुढेसकालसँग सम्बन्धित छ.
4. खराब निद्रा गुणवत्ता जस्तै निदाउन गाह्रो, उदास, निस्केको समयमा टसिंग र मोड हुन्छ. र यो दबाब र अन्य मुद्दाहरूको कारणले होइन. यो तपाईको बुढो भइरहेको कारणले हुन सक्छ.
सबै जना जवान हुन चाहन्छन, तर यो बाँच्न र मर्न एक प्राकृतिक नियम हो. जो कोहीले पनि यो उल्ट्याउन सक्दैन. अवस्थित औषधिले मानिसहरूलाई कायापलट गर्न सक्दैन. बुढेसकालको प्रक्रिया ना naked्गो आँखाले देख्न सक्दैन. तर यो वास्तवमै अवस्थित छ.
यदि माथिका चार संकेतहरू तपाईलाई लाग्छ भने, यसले संकेत दिन्छ कि तपाईंले ध्यान दिनु पर्दछ र केही रोगको जोखिम हटाउन जाँचको लागि अस्पताल जानु पर्छ. बुढेसकालसँग व्यवहार गर्ने यो सही तरिका हो.
अघिल्लोप्रोस्टाटाइटिस को लागी प्राकृतिक उपचार
अर्कोपुरुषहरूको लागि आत्म-जाँच गर्दै! यदि यी5शरीरका अंगहरू आकार भन्दा बढि छन्, जीवन प्रभावित हुनेछ.